လားရှိုး မြို့ရှောင်လမ်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးခြံတွင် ရပ်ထားသော မြေထိုး ဘူဒိုဇာယာဉ်ကို အမည်မသိ ?? - Yangon Media Group
လားရှိုး မြို့ရှောင်လမ်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးခြံတွင် ရပ်ထားသော မြေထိုး ဘူဒိုဇာယာဉ်ကို အမည်မသိ ??
လားရှိုး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) လားရှိုး- မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေး လားရှိုးမြို့ရှောင်လမ်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးခြံတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် ည ၁ဝ နာရီခန့်တွင် လက်နက်အရှည်များကိုင်ဆောင်ထားသည့် အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်သုံးဦးမှ အဆိုပါ စိုက်ပျိုးရေးခြံဝင်းအတွင်း ရပ်တန့်ထားသော မြေထိုးဘူဒိုဇာယာဉ်နှင့် လယ်စောင့်တဲတစ်လုံးတို့ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါမီးရှို့မှုဖြစ်ပွားရာနေရာသည် လားရှိုး မြို့ရှောင်လမ်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော အိုရီယမ်တမ် တိုးဂိတ်နှင့် နှစ်မိုင်ခန့်သာကွာဝေးပြီး လားရှိုး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုအဝေးပြေး ကားလမ်းမကြီး၏ဘေး မိုင်တိုင်အမှတ် (၈/၃) အနီးတွင်ရှိသော ကောင်းကော် ရွာရှိ စိုက်ပျိုးရေးခြံဝင်းအတွင်း၌ဖြစ်ပြီး မီးရှို့ခံရမှု ကြောင့် မြေထိုးဘူဒိုဇာ၏ ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံနှင့် အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းတို့ မီးလောင်ပျက်စီးကာ ယာဉ်မှာ မောင်းလို့မရတော့သည်အထိ ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး လယ် စောင့်တဲမှာမူ တစ်လုံးလုံး ပြာကျသွားခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ မီးရှို့ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပါစိုက်ပျိုးရေးခြံတွင် ခြံစောင့်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးက ”မနေ့ည ၁ဝ နာရီအချိန်လောက်မှာ ‘ဝုန်း’ဆိုတဲ့အသံကြားလိုက်ရလို့ အိပ်ရာကနေထကြည့်တဲ့အခါ ခြံထဲမှာရပ်ထားတဲ့ မြေထိုးစက်က မီးလောင်နေပြီး အဲဒီမီးရောင်နဲ့မြင်လိုက်ရတာက လူသုံးယောက် သေနတ်အရှည်လွယ်ထားပြီး ခြံ အောက်ဘက်ကို ဆက်ဆင်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ ခြံအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ လယ်စောင့်တဲကိုလည်း မီးရှို့သွားပါတယ်။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းလဲဆိုတာတော့ မသိပါဘူး။ သူတို့စကားပြောသံလည်း မကြားရ တော့ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဘူဒိုဇာက ခြံထဲမှာရောက်နေတာ ဆယ်ရက်လောက်ရှိပါပြီ။ ဒီခြံပိုင်ရှင်က တရုတ်လူမျိုး။ နမ့်ခမ်းမှာနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အိပ်တဲ့ နေရာကိုတော့ သူတို့မဝင်လာခဲ့ပါဘူး။ လူကိုလည်း ဘာမှမလုပ်သွားပါဘူး” ဟု ပြောကြားသည်။
ယခုအခါ အဆိုပါဖြစ်ပွားရာနေရာအား တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများမှ လာရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ပြုလုပ်သည်ကိုမူ လောလောဆယ်မပြောနိုင်သေး ကြောင်း၊ တောတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းက လုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ ရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက စကားရပ် အ
ကလေးဒေသ စိုက်ခင်းများတွင် ပိုးသတ်ဆေးများ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှုကြောင့် သီးနှံထွက်နှုန်းနှင်?
မန်စီးတီးနှင့် ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ချိန် နည်းပါးခြင်းအပေါ် ကွန်တီ ဝေဖန် ချန်ပီယံလိဂ်နိုင်ပွြဲေ